कांग्रेसका कार्यकर्ताले त्यसविरुद्ध मुकाबिला गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । यो आदर्श र विचारधाराको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने तयारी हो, अरू थोक होइन । कांग्रेसले मधेसी जनसमुदायलाई आफ्नो मधेसप्रतिको विचारधाराबाट चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । हिजो विभाजित अवस्थामा कांग्रेसले मधेसका हकमा संघीय व्यवस्था र राजकीय आरक्षण’bout स्पष्ट निर्णयगरेको थियो । दुइ पार्टीको एकीकरणको हतार-पतारमा अहिले ती प्रस्ताव ओझेलमा परेका छन् । कांग्रेसले विधिवत रूपमा संघीय राज्य र मधेसी आरक्षणको कुरो सबैभन्दा पहिले उठायो भन्ने घोषणा गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार छ । कांग्रेसले यो कुरो एक कदम बढेर घरका छत, छाना र धरहरासमेतमा चढेर सिंगो देशलाई सुनाउन चुक्नु हुंदैन ।
यतिमात्र होइन, कांग्रेसले आफ्नो पुंजीका रूपमा भन्ने-सुन्ने र प्रचार गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूण कुरो छ । मधेस आन्दोलनको कोलाहलमा कांग्रेसले त्यसतर्फध्यान दिएको देखिंदैन । एकातिर कांग्रेसका नेताहरू आफ्ना भाषणमा शब्दैपिच्छे बीपी कोइरालाको नाम उच्चारण गर्छन् भने अर्कोतिर हाम्रा नेताहरूले कोइरालाको वैचारिक उत्तराधिकारलाई गम्भीरतापूपक लिएको देखिंदैन । भूमण्डलीकरणको आंधीमा लोकतान्त्रिक समाजवाद विस्मृत भयो । दुनियांको धेरै मुलुकमा प्रायः यस्तै भयो । त्यो आर्श्चर्यजनक नहुन सक्छ । तर मधेस आन्दोलनको यत्रो प्रचण्ड आंधीबेहरीमा कोइरालाको मधेस र मधेसी विषयक शिक्षा कसरी बिर्सियौं – कांग्रेसका प्रमुख संस्थापक एवं सिद्धान्तकार बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो भन्ने निर्विवाद छ । उहांले आफ्नो सुदृध राजनीतिक जीवनमा आज नेपालमा देखिएका यावत् समस्या’bout दृष्टि पुर्‍याएको देखिन्छ । कोइरालाका यावत् लेख-भाषण गहिरिएर हेरेमा गणतन्त्र र राज्यको पुनःसंरचनासमेतमा विचार दिनुभएको छ । मधेसका हकमा त अझ एउटा विशेष पृष्ठभूमिको विशेष प्रसंग छ । जनमत संग्रह लगत्तै पछिको कुरा हो ।जनमत संग्रहमा सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थाले बहुदलीय व्यवस्थालाई चार लाखको मतान्तरले जितेको थियो । तथापि त्यो विजय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विजय थिएन । त्यो सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विजय थियो । त्यसमाथि बहुदलको पक्षमा बीस लाख मत परेको थियो । पूरै राज्यसंयन्त्र लाग्दा पनि त्यति भारी मत्र प्राप्त गर्नु चानचुने कुरा थिएन । उहांले त्यो बीस लाख मतको कदर गरेर संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने अभिमत राख्नुभयो । राजा वीरेन्द्रले संविधानको तेस्रो संशोधनका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका थिए । त्यस आयोगसमक्ष बीपीले लिखित सुझाव दिनुभएको थियो । कांग्रेसका मित्रहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिएर पढ्नु आवश्यक छ । त्यस समयमा मधेस आन्दोलन थिएन । मधेसका नेतामा पर्याप्त आत्मविश्वास थिएन । उता जनमत संग्रहमा देखिएको विजयले पञ्चायत व्यवस्थाको आत्मविश्वास शिखरमा थियो । त्यतिबेला संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने क्रममा बीपीले अन्य सुझावसाथ मधेसको प्रसंगमा समेत प्रस्ट भन्नुभएको थियो:
This entry was posted on मार्च 3, 2008 at 1:58 अपराह्न	and is filed under Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.